China Grow Light Kits oo Dhamaystiran Warshada Nidaamka Dhirta Cagaaran ee Hydroponics iyo alaab-qeybiyeyaasha | Virex
Koritaanka Xirmooyinka Iftiinka Dhameystiran ee Nidaamka Beeritaanka Guriga cagaaran ee Hydroponics
VIREX Grow xirmooyin nalka oo ay ku jiraan teendho koraan, iftiinka iftiimaya, marawaxad tubbada inline ah, filter kaarboon, tuubada biraha aluminium iyo tuubooyinka birta ah. Hayso nidaam beero aqalka dhirta lagu koriyo ah oo dhamaystiran.
Xirmooyinka iftiinka kora ee VIREX waxay leeyihiin iftiin muuqaal buuxa oo ku habboon dhammaan heerarka koritaanka; Dareemaha iftiinka la hagaajin karo si loo hagaajiyo xoogga iftiinka; Dahaarka ilaalinta ee ledhku waxay caawiyaan kordhinta nolosha adeegga; Ma jirto taageere, ma jiro buuq. Iftiinkani waxa uu bixiyaa soo saarid iftiin xoog leh iyo dhexgalka dahaarka labbiska ah, taasoo keentay in dhalidda ugu badan.
Teendhada beeritaanka rafaadka ah: Gudaha mylar ee milicsiga waxay kordhisaa doorka laambad beeridda; Shaqada culus 600D Oxford waxay raadinaysaa cimri dheeri; Jibbaar lagu kalsoonaan karo ayaa si habsami leh u xidha; Tobban irbad laba jibaaran, xoog sare, ilaalinta iftiinka; Qaab-dhismeed xooggan, jir bir ah oo xooggan; Mareegaha ku filan / hawo-mareennada / furayaasha fiilooyinka; Shaashadda muraayadda muuqaalka ee la go'i karo si loo eego loogana saaro qoyaanka; Saxarada hoose waxay ka hortagtaa daadinta sagxada waxayna ilaalisaa nadiifinta teendhada.
Nidaamka hawo-qaadista ee xoogga leh: taageere degan oo xoog badan iyo isku-dar ah filtarrada kaarboonka iyo tuubooyinka aluminium dabacsan; Aad u fudud in la rakibo oo la isticmaalo; Bixi hawo xoog leh iyo wareegga hawo habboon.
Kaydinta Lacagta iyo Tamarta oo Dhameystiran Xirmooyinka Teendhada Dhiritaanka: Isbarbardhigga qiimaha shayga gaarka ah iyo qiimaha teendhada beeridda xirmo dhammaystiran, xirmooyinku waxay kaydiyaan lacag iyo waqti badan intii aad shay kasta si gaar ah u iibsan lahayd. Naqshadaynta isticmaale-saaxiibtinimo, fududahay in la isku keeno oo la shaqeeyo, xitaa kuwa bilowga ah.
Dhammaan qaybaha waa ku habboon yihiin oo si sax ah ayaa loo siman yahay. Si kalsooni leh ku iibso oo ilaali tayada: Iibka xirmooyinka korriinka tayada sare leh waxay la macno tahay inaad qiimo badan ku heli doonto muddo dheer. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan nagala soo xidhiidh email ahaan. Waxaa naga go'an inaan bixino taageero adeeg macmiil oo heer sare ah ka hor iyo ka dib iibsashada.
Kori xirmooyinka iftiinka oo ay ku jiraan:
1.Grow teendho: 600D oxford maro iyo in ka badan 95% mylar milicsiga.
2.Led Light: Naqshad kontorool caqli leh iyo buro dimming.
3.Inline marawaxad: Iyada oo la socota baaritaanka iyo shaashadda, xawaaraha dabaysha la hagaajin karo, qoyaan, heerkulka iyo waqtiga.
4.Carcon filter:Tayada Sare ee Australian Virgin Activated Carbon iyo Flange la safeeyey ayaa si wax ku ool ah u saarta 99.5% urta
5.Aluminium bireed tube: Miisaanka leh, ductility wanaagsan
Magaca Alaabta Xirmooyinka Koritaanka iftiinka VIREX
Nooca Beerta gudaha ee aqalka cagaaran
4 Inj iyo 6 inch
Dejinta Waxaa ka mid ah Ilays, filter, milicsi, ballast, tubbada, hoops
Isticmaal meel Teendhada koraan
Hore: Naqshad Cusub Oo Koritaanka Shandad La Habeeyay Isticmaal Waara Khudaar la beeray
Xiga: 90CM*6 Lakabyada Shabakadda Qalalan ee Lagu Go'i Karo Qalajinta Albaabkayada
Korri Xirmooyinka Iftiinka 4/6 inch 600 Watt HPS Nalalka Nalalka